Entries tagged with "somali america" | SSC TIMES
SSC TIMES » Entries tagged with "somali america"
// SSC Minnesota 16 Octorber 2010 celebration:
Taksiile Marku Sheegtay Muslim Mindi La Geliyay (Daawo)
New York (ssctimes.com) Dhacdo Layaab leh ayaa ka dhacay magaalada New York ee dalka Mareykanka, kadib markii nin Lagu magacaabo Ahmed Sharif (43 jir) la damcay in la gowroco marku sheegtay inuu yahay Muslim. Ahmed Shariif oo ka ahaa taksiile magalada New York Mudo gaaraysa 35 sanadood, oo asalkiisi ka yimid dalka Bangladesh, laakiin caruur iyo xaasba ku yeeshay dalka Mareykanka ayaa sheegay inuu aad uga naxay xanuun aad u badana kazoo gaareen arinti isagoo maalin shaqadiisa iska wata u timid.
Ahmed Sharif ayaa waxaa taksigiisa soo raacay nin lagu magacaabo Michael Enright oo 21 sano jir ah, iyadoo intii uu ninkaasi wadayna ay dhexmartay sheeko guud taa oo ah inuu ka wareystay meesha uu ka yimid, intee sano ayaad joogtaa wadankaan mareykanka iwm, ugu dambeyntiina wuxuu weydiiyey ninkaasi ma … Read entire article »
Telefishinka CBS-2 oo ku yaala magaalada New York ayaa sheegay in labadaa kooxoodba mudaharaadkoodii uu ku dhaamaaday si nabad galyo ah. Booliska magaaladaa ayaa … Read entire article »
Hotel Siinaya 4 Dumaro Somali $40,000
Louisiville (ssctimes.com) Hotel diiday inay shaqaalihiisa xirtaan xijaab ayaa maanta ku dhowaaqay inu siinayo 4 dumaro Somali ah $40,000 si ay u joojiyaan maxkamadi ay u wadeen dacwadooda, taasoo ah inay meeshii ay ka shaqeenayeen u diiday inay xijaabki xaqa ay ku lahaayeen xirtaan. Dumarkan ayaa dacwad dheer ku furay hoteelka oo sheegtay inuu diidanyahay inay diintooda raacaan ayagoo shaqadooda wata. Hotelkii ayaa hayadaha u dooda xuquuqda shaqaalaha dabo galeen oo ku eedeeyeen inu hotelka danbi ka galay sharciga dalka Mareykanaka, kaasoo ah in qofka waxuu xaqiiqdi aaminsanyahay lagu ixtiraamo laguna xumeyn.
After not being allowed to wear their religious head scarf to work, four Somali women are now receiving compensation. The Louisville Marriott Downtown Hotel told the four women of Muslim faith they were not allowed to … Read entire article »
Suuqa Hormud Waxa Lagu Qoray ‘Go Home’ (Daawo)
Suuqa Somalida magaalada St.Cloud ee lagu magacaabo HORMUD waxaa lagu sameeyay qoraal rinji ah oo dad cunsiriyaal ah ku qoreen “GO HOME” ama “GURIGIINA AADA”. Taasoo looga danleeyahay in lagu maago ama lagu xumeeyo Somalida magaalda dagan, weliba umada meesha baayacmushtarka ah. Arintan ayaa dad badan oo Somali ah oo magaalada dagan aad uga xanaajisay. Jaamac Calimad oo ah nin Somali ah oo u waramay Joornaalka St Cloud Times ayaa sheegay “Jawaabta arintan ku wacan waxa weeye, anagu gurigayagi ayaan joognaa, meelna uma socono”.
Dhibaatooyinka cunsurinimada ee magaalada St.Cloud ayaa ahayn mid cusub oo weli waxa socdo baaritaano ku saabsan ardayda Somalida magaalada skuul ay ku tilmaamen in si cunsurinimo ahi ula dhaqmeen.
Askarta magaalada ayaa balan qaaday inay baaris xoogan bilaabayso siday u heli lahaayeen dadki ka danbeeyay … Read entire article »
Find The Difference: Sidney Elyea & The Somaliland Clan Militia (Daawo)
Sidney Elyea waa nin kusoo xasuusinkara sida xun ee dadka SSC loo galayo loona galay, taasoo dhibka dadka SSC lagu hayo kaliya tahay qabiil. Umad dhan baa lagu xumeynayaa ilaahay siduu u sameeyay dartiis, umad dhan baa guryahooda laga saarayaa oo duurka lagu qasbay inay ku ordaan, magaalo iyo guryo aysan lahayna aadaan si ay u nabad galaan. Odayaal weligood daganaan jiray Laascaanood, ayaa qabiilkooda dartiis lagu qasbay inay ka baxaan oo guryahoodi, reerkoodi iyo waxay usoo dhidideen oo dhan ka tagay waayo waxay noqdeen qabiil meesha la doonayo in laga masaxo, waxey noqdeen qabiil la doonayo in taariiq iyo tolba laga saaroo duurka loo haajiriyo. Reer SSC ogaada meeshaad joogtaan dan idinma geyn waxa idin geeyey waxa weeye qabiil la necebyahay baad noqoteen, jinsigi Somali … Read entire article »